पृथक पाटो(Off The Beat) in Bizshala: Business, economic and financial news of Nepal -
विश्वका धनी र शिक्षितका छोराहरु नै आतंकवादी संगठनमा !
-मार्क से जुलाइ १ मा बन्दुकधारीहरुको समूहले ढाकास्थित एउटा क्याफेमा आक्रमण गर्यो। बन्धक बनाइएका मध्ये २० जनाको हत्या गरियो र दुई प्रहरी र ६ संदिग्ध हमलाकारी पनि मारिए। प्रत्यक्षदर्शीहरुले उनीहरुले कुटपिट र धारिलो हतियार प्रयोग गरि मारिएका मानिसहरुका शवका टुक्राहरु देखेको र कुरान बाचन गर्न नसक्नेहरुलाई यातना दिएर मारिएको दाबी गरेका...
सफल व्यवसायी बन्ने हो ? पछ्याउनुस् यी वास्तु टिप्स
काठमाण्डौ । सफल व्यवसायी बन्न सजिलो छैन । तपाईं सफल व्यवसायी बन्न चाहनुहुन्छ भने यसमा वर्षौको मेहेनत लाग्छसक्छ । व्यापारमा तपाईंको सानो गल्तीले ठूलो घाटा पनि हुनसक्छ । कहिलेकाही वास्तु दोष पनि व्यापारका लागि बाधक बनिदिन्छ । यसकारण व्यापार सुरु गर्नुअघि वास्तुलाई ध्यानमा राख्नु हितकर हुन्छ । यही कारण धेरै कम्पनीहरु हिजोआज आफ्नो...
केपी ओलीको रोजाई आइफोन, ओबामाको ब्ल्याकबेरी (कुन देशका कार्यकारी कुन मोवाइल बोक्छन् ?)
काठमाण्डौ । विश्वका विभिन्न राष्ट्रका नेताहरु कस्ता–कस्ता मोवाइल प्रयोग गर्छन् होला ? यो विषय आम चासोको बिषय हो । जस्तो अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ब्ल्याकबेरी फोन प्रयोग गर्छन् भने नेपालका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली आइफोनका फ्यान हुन् । यसैगरी, विश्वका अन्य देशका नेता तथा कार्यकारी प्रमुखहरुले कुन–कुन कम्पनीको मोवाइल...
नरेन्द्र मोदीको गजबको कपडा क्रेज, २ वर्षमा ११२ करोड स्वाहा !
काठमाण्डौ । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीमा अचम्मको कपडा मोह छ । उनी आफ्नो लुक्समा विशेष ध्यान दिन्छन् भन्ने कुरा मिडियाहरुमा देखिने उनका फोटोहरुले समेत प्रष्ट पार्छ । कपडामा निकै चुजी नरेन्द्र मोदी दिनमा कतिपटक कपडा फेर्छन् होला ? उनी कति महंगा कपडा लगाउँछन् होला ? मोदीको कपडा क्रेजको विषयमा भारतीय र उनीप्रति चासो राख्ने अन्य...
१ हजारका लागि नाबालक छोरा बिक्री !
एजेन्सी । भारतको झारखण्ड प्रान्तको पूर्वी सिंहभूम जिल्लाका एक आदिवासीले १ हजार रुपैयाँमा आफ्नो छोरालाई बिक्री गरिदिएका छन् । प्रहरी बिक्री भएका बच्चाको खोजीमा जुटेको बीबीसीले जनाएको छ । यो घटना सिंहभूम जिल्लाको धोलाबेडा पञ्चायतको बारुनिया गाउँस्थित डूमरिया क्षेत्रको हो । यहाँका मुखिया सहदेव मुर्मुका अनुसार बारुनियाको...
यो हो २ वर्षदेखि विश्व भ्रमणमा निस्किएको अनौठो कुखुरी !
काठमाण्डौ । फ्रेञ्च मिडियामा एउटा अनौठो खबर भाइरल बनिरहेको छ । मिडियाहरुमा एउटा अनौठो दोस्तीको बिषयमा खूब चर्चा भइरहेको हो । दोस्ती हो एउटा कुखुरा र एक नौजवान नाबिक बीचको, यी दुवै मित्र विगत दुई वर्षदेखि समुन्द्रको बाटो हुँदै विश्व भ्रमणमा निस्किएका छन् । फ्रान्सको ब्रिटनीबाट आएका गुइरेक सन् २०१४ मे महिनाबाट मोनिक नामको पोथी...
एक मनकारी सीइओको कथा–कमाउँदै समाजसेवामा लगाउँदै
काठमाण्डौ । ‘जन्मँदा मानिस मुठी कसेर आएको हुन्छ । यसको अर्थ अब म यो संसारमा केही गर्छु भन्ने उसको संकेत हो भनिन्छ । मानिस हुर्किन्छ, ठूलो हुन्छ, पैसा कमाउँछ । तर मर्दा मानिसले के लान्छ र ?’ जीवन जिउनुको वास्तविकताभित्र डूबुल्की मार्दै झलक खनाल हामीसँग पोखिए–‘खालि हात जानुपर्छ । चितामा जलाउने बेलामा लगाएको एकसरो लुगा पनि खोलिदिन्छन्...
एउटा हस्ताक्षरको मूल्य एक अर्ब ! यी हुन संसारकै महंगा ६ हस्ताक्षर
काठमाण्डौ । जमाना सेल्फीको आइसक्यो । तर पनि मानिसको अटोग्राफप्रतिको क्रेज अझै कम हुन सकेको छैन । आजको मितिमा पनि सेलिब्रेटीहरुको ऐतिहासिक अटोग्राफ खरीदका लागि मानिसहरु करोडौं रुपैयाँ खर्च गर्न समेत तमतयार देखिन्छन । सन् २०१२ मा अमेरिकाको पहिलो राष्ट्रपति जर्ज वाशिङ्टनको एक अटोग्राफ १ अर्ब ४ करोडमा लिलामी भएको थियो । आज हामी तपाईंलाई...
कपडा र मेकअपमा करोडौं खर्च गरेर हिलारी इतिहास रच्दै !
काठमाण्डौ । अमेरिकाको इतिहासमै पहिलोपटक कोही महिला राष्ट्रपति पदका लागि चुनाव लड्दैछिन् । हिलारी क्लिन्टन त्यस्ती पहिलो अमेरिकी महिला हुन्, जो राष्ट्रपतिको चुनाव लड्दैछिन् । अमेरिकामा राष्ट्रपतिको उम्मेद्वारको रुपमा छनौट हुन पनि निकै धेरै चरणहरु पार गर्नुपर्छ । सो क्रममा उनले आफूलाई जसरी सुझबुझपूर्ण ढंगले प्रस्तुत गरिन्,...
अर्घाखाँचीमा संसारकै सबैभन्दा सानो अण्डा, गिनिज बुकमा नाम लेखाउने प्रक्रिया सुरु
अर्घाखाँची । अर्घाखाँचीको सन्धिखर्कमा कुखुराले संसारकै सबैभन्दा सानो अण्डा पारेको छ । सानो अण्डा पारेपछि गिनिज बुकमा लेखाउने प्रयास थालिएको छ । सन्धिखर्कका कृषक हरिप्रसाद अधिकारीले गिनिज बुक अफ वल्र्ड रेकर्डमा उल्लेख गरेकोभन्दा सानो अन्डा आफ्नो कुखुराले पारेको दाबी गरेका राससले लेखेको छ । उनले गिनिज बुकमा रेकर्ड राख्ने...
यो हो विश्वकै धनी आतंकवादी संगठन
काठमाण्डौ । विश्वमै कुख्यात आतंकवादी संगठन इस्लामिक स्टेट(आइएस)को आधार क्षेत्र पछिल्ला महिनाहरुमा खुम्चिन थालेको छ । उसले कब्जा गरेको तेल उत्पादनको क्षेत्र समेत साँघुरो बन्दै गएको छ । तर यी सबै समस्याका बाबजुद पनि यो संगठन विश्वकै सबैभन्दा धनी आतंकवादी संगठन बन्न सफल भएको छ । सेन्टर फर द एनलाइसिस अफ टेरोरिजम नामक संस्थाले जारी गरेको...
जहाँ दाह्री काटेको, परेला मिलाएको र टाइट कपडा लगाएको पनि कर तिर्नुपर्छ !
काठमाण्डौ । हरेक दिन दाह्री काटेर चिटिक्क निस्किने बानी तपाईको छ ? नेपाल र अन्य कैयन देशहरुमा यो बानीले तपाईंलाई खासै असर पार्दैन, तर विश्वको केही इलाका यस्ता छन्, त्यहाँ कुनै दिन तपाईं झुक्किएर पुग्नुभयो र दाह्री काट्नु भयो भने तपाईले त्यस बापत महंगो मूल्य चुकाउनुपर्छ । यस्तो क्षेत्र हो अन्तर्राष्ट्रिय आतंकवादी संगठन आइएसआइएसको इलाका...
त्यो डरलाग्दो तीन मिनेट, सयौ मानिस डूंगासँगै सागरमा डूब्दै थिए ( एक्सक्लूसिभ फोटो फिचर)
एजेन्सी । इटली नजिक भूमध्यसागरमा प्रवासीहरुले खचाखच भरिएको एक डुंगा डूब्दै गर्दाको एक्सक्लूसिभ तस्विरहरु क्यामरामा कैद भएका छन् । यो घटनामा ठूलो डुंगामा चढेका ५६२ व्यक्तिलाई बचाइएको छ । तर हालसम्म ५ जना मानिसको मृत्यु भइसकेको बीबीसीले जनाएको छ । डूंगा ढलपल गरिरहँदा नजिकै रहेको एक उद्धारकर्ता जहाज देखेपछि मानिसहरु त्यसतर्फ...
विश्वको एउटा यस्तो शहर, जहाँ भाडाको घर पाउन ९ वर्षसम्म कुर्नुपर्छ !
काठमाण्डौ । विश्वमा कुनै एउटा यस्तो शहर पनि छ, जहाँ भाडाको कोठा वा घर पाउन ९ वर्षसम्म लाग्नसक्छ भन्दा तपाईलाई पत्यार लाग्छ ? सायद लाग्दैन । तर यस्तो शहर यूरोपमा छ । स्वीडेनको राजधानी स्टकहोम यस्तो शहर हो, जहाँ भाडाको घर वा कोठा खोज्नु भूसको डंगुरमा हराएको सीयो खोजेजस्तै गाह्रो कुरा हो । यहाँ सामान्य घर भाडामा पाउन मात्र कतिपयले ९ वर्षसम्म...
असंभव के रहेछ र ? दुई दृष्टिविहीन नारीले रचे नयाँ इतिहास
-विष्णु नेपाल काठमाण्डौ । अध्ययन, अनुसन्धान गर्न आँखाको दृष्टि नै चाहिन्छ ? चाहिँदैन । मन र आँट भएमा सुनेर पनि विद्यावारिधि पूरा गर्न सकिँदो रहेछ । इच्छा र जाँगर भए आँखाले हेरेर भन्दा कानले सुनेर गर्ने उच्च अध्ययन सर्वाेत्कृष्ट हुँदो रहेछ । दृश्यविहीन दुई नारीले विद्यावारिधि पूरा गरी नयाँ इतिहासको रचना गरेका छन् । लक्ष्मी पोख्रेल र...